bicarbonate ammonium biyaha ammonia carbon dioxide
(rnn) (kh) (kh) (kh)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta NH4HCO3 → H2O + NH3 + CO2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee NH4HCO3 (ammonium bicarbonate)?
Sidee fal-celintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo NH3 (ammonia) iyo CO2 (kaarbon dioxide)?
Dhacdada ka dib NH4HCO3 (ammonium bicarbonate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada NH4HCO3 → H2O + NH3 + CO2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta NH4HCO3 (ammonium bicarbonate)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NH4HCO3 (ammonium bicarbonate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NH4HCO3 (ammonium bicarbonate) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O (ammonium bicarbonate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NH3 (ammonium bicarbonate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NH3 (ammonia) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee CO2 (ammonium bicarbonate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CO2 (kaarbon dioxide) badeecad ahaan?
2 (NH4)2Crown4 → 5H2O + N2 + 2NH3 + Cr2O3
kaalshiyamka hydroxide chloride ammonium biyaha ammonia kaloriinnada kaalshiyamka ah
(digo yara) (lng) (kh)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Ca(OH)2 + 2NH4Cl → 2H2O + 2NH3 + CaCl2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Ca (OH) 2 (calcium hydroxide) ee NH4Cl (ammonium kloride)
Ca (OH) 2 xal ayaa la falgala NH4Cl
Dhacdada ka dib Ca (OH) 2 (calcium hydroxide) waxay la falgashaa NH4Cl (ammonium chloride)
Shaybaarka, gaaska amonia waxaa lagu soo saaraa gubida amonia saline, tusaale ahaan, NH4Cl oo leh Ca (OH) 2
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Ca(OH)2 + 2NH4Cl → 2H2O + 2NH3 + CaCl2